Namarana ny fifanolanana efa hatry ny folo taona niaraka tamin'i Gresy i Makedonia, nanova anarana
Home » Toerana fitsangatsanganana » Namarana ny fifanolanana efa hatry ny folo taona niaraka tamin'i Gresy i Makedonia, nanova anarana
Nanaiky ny hanova ny anarany ho Avaratr'i Makedonia i Makedonia mba hamaranana ny filaharana efa am-polony taona maro miaraka amin'i Greece, izay ankoatry ny zavatra hafa nanakana ny repoblika Yugoslavia teo aloha tsy hiditra ao amin'ny EU sy ny OTAN.
"Hantsoina hoe Repoblikan'i Makedonia Avaratra [Severna Makedonija] i Makedonia," hoy ny praiminisitra Zoran Zaev, ny talata teo. Hampiasaina eto an-toerana sy any ivelany ny anarana vaovao, miaraka amina fanitsiana mifanaraka amin'ny Lalàm-panorenany i Makedonia, hoy ihany i Zaev.
Ny fanambarana dia tonga taorian'ny fifampiresahana an-tariby niaraka tamin'ny mpiara-miasa grika, Alexis Tsipras, ny talata teo. Nilaza i Tsipras fa nahazo “fifanarahana tsara izay mandrakotra ny fepetra mialoha napetraky ny lafiny grika” ny Atena rehefa nampahafantariny ny filoham-pirenena grika, Prokopis Pavlopoulos, momba ny valin'ny fifampiraharahana.
Ny elanelana misy eo amin'i Atena sy Skopje dia nitohy nanomboka ny taona 1991, rehefa nisaraka tamin'i Yugoslavia i Makedonia ary nanambara ny fahaleovany tena. Nilaza i Greece fa tamin'ny fiantsoana ny tenany ho Repoblikan'i Makedonia ilay firenena mifanila aminy dia nilaza ny fitakiana faritany iray an'ny faritany avaratra grika, antsoina koa hoe Makedonia.
Noho ny fifanolanana teo amin'ny anarana dia nampihemotra ny andrana rehetra nataon'i Skopje i Gresy hanatevin-daharana ny Vondron Eropeana sy ny OTAN. Ny firenena dia nekena ho an'ny ONU ihany koa tamin'ny 1993 ho Repoblika Yugoslavia teo aloha an'ny Makedonia (FYROM).
Hatsangana ny anarana vaovaon'i Makedonia ho fitsapan-kevi-bahoaka, hatao amin'ny fararano. Tsy maintsy hohamafisin'ny parlemanta Makedoniana sy Grika koa izy io.
Saingy, ny fandefasana ny anarana hoe "Makedonia Avaratra" amin'ny alàlan'ny parlemanta grika dia mety hanjary ho sarotra satria ny ankamaroan'ny antoko dia nandà izay karazan'olona marimaritra iraisana momba ity raharaha ity.
“Tsy manaiky izahay ary tsy hifidy izay fifanarahana rehetra ao anatin'izany ny anarana hoe 'Makedonia,'” hoy Panos Kammenos, minisitry ny fiarovam-pirenena Greek ary lehiben'ny antoko Greek Independent mahaleo tena.
Manohana ny hevitry ny besinimaro ireo solombavambahoaka satria an-jatony maro ny Grika nandeha an-tongotra tamin'ny volana febroary ho fanoherana ny fampiasana ny tany "Makedonia" nataon'ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy. Nisy ihany koa ny famoriam-bahoaka tany Makedonia tamin'ny lohataona, nitaky ny hametrahana ny anaran'ny firenena amin'ny toerany.
Raha fehezina: mpandeha sinoa taloha sy ankehitriny